Ny Tontolon’ny Blaogy Hindi : Avy Amin’ny Fahalalahana Hiteny ka Hatramin’ny Fangalàrana Blaogy! · Global Voices teny Malagasy
Ny Tontolon'ny Blaogy Hindi : Avy Amin'ny Fahalalahana Hiteny ka Hatramin'ny Fangalàrana Blaogy!
Voadika ny 15 Desambra 2017 8:41 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamn'ny Febroary 2007)
Mbola resaka fanavaozambaovao iray hafa momba izay mitranga eo amin'ny tontolon'ny Blaogy Hindi hatrany. Ary dia ho atombontsika amin'ny resaka habakabaka aloha amin'ity indray mitoraka ity. Resahan'i Ashish amintsika ny mikasika ireo zafikelin'ny Masoandro, ny mikasika ny Asteroida & ny Fehin'ny Asteroida manasaraka ny Planeta Mars sy Jupiter. Velabelarin'i Ashish bebe kokoa ny momba izay nipoiran'ireny Asteroida ireny, amin'ny fanolorana ireo teoria efa fantatra nomen'ny maro, ny mafonja indrindra amin'izy ireny dia ilay manao hoe avy amin'ny fifandonan'ny planeta Mars sy Jupiter tany aloha tany no nahatonga ireo Asteroida ireo izay nihalevona tamin'ny fomba rehetra! Lazainy amintsika ihany koa ny fomba nahaterahan'ireo kintana avy amin'ny ” Nebula” sy ny mombamomba ireo Kintana “Neutron” sy “Pulars”.
Fa tsy mijanona amin'ny hoe resaka fahapotehana na fahaterahana eny amin'ny habakabaka fotsiny ihany ilay teoria, fa mahakasika ny tena zava-misy marina koa ho an'ireo rehetra miaina eto amin'izao Planeta tany izao mihintsy, iray amin'ireny ny fomba nahafaty an'Ingahy Netaji Subhash Chandra Bose , izay mbola mijanona ho Mistery tokoa , tsaroan'i Sanjay io goavana tia tanindrazana io ary banjininy ny amin'izay antony sy ny fotoana nahafatesan'I Netaji. I Lokmanch koa dia namoaka fehin-kevitra vaovao mikasika an'i Netaji, izay manome toerana ireo tsoakevitra efa eken'ny maro sy ireo tsoakevitra vaovao.
Etsy ankilany, tsy misy fitaovana tsara indrindra ho an'ny Teoria ankoatra ny Boky , ka izany no nahatonga an'i Jitu mampiseho amin'ny fomba hafa ny tokony hilazànao amin'ny hafa ny Boky anananao. Tena am-pahatsorana no ilazàko fa mbola tsy tena resy lahatra amin'ilay izy aho na ny hahatanteraka izany koa, kanefa mino aho fa ry zalahy ao amin'ny Shelfari tsy maintsy efa nanana tolo-kevitra ampandehanana azy io ihany ankoatra ny fampiharana Web 2.0 izay avy amin'ny katro-doha nihelina fotsiny ihany tsy mba nosainina lalina akory! 😉
Tamin'ny fanohizana, hitanay fa andraman'i Pankaj ny mampitaha ny mpanohitra ao amin'ny Parlemanta Indiana sy ny ao amin'ny Kaongresin'i Etazonia satria hitany ho toa hafahafa ihany ny mahita ireo mpanohitra ny antoko eo amin'ny Fitondràna ao Etazonia manindrahindra ny asan'ny fitondràna sy ny Filoha, fa ny ankamaroan'ireo mpanohitra eto India dia mezaka ny hahita izay hadisoana ao anatin'ny asa ataon'ny antoko eo amin'ny fitondràna, tsy mba misaina akory na mahasoa ny firenena na tsia ilay asa. Mandritra izany, nahatsikaritra i Ravi Ratlami fa nisy nangalatra ny votoatin'ny bilaoginy ary nozarain'ilay olona tany amin'ny blaoginy amin'ny anarany ihany. Teo noho eo dia hitan'i Ravi ilay tranonkala meloka ary nanaovany tsoakevitra fa ny ankapoben'ny zavatra ao amin'ilay tranonkala dia fangalarana votoaty avy amin'ireo blaogera hafa sy famoahana izany amin'ny anaran'izy ireo manokana avokoa, angamba mba hahazoan'izy ireo laharana tsaratsara amin'ny fikarohana anaty aterineto na koa tombony amin'ny fahazoany dokambarotra toy ny Google AdSense sns. ao amin'ilay bloagy! Milahatra amin'ireo, nizara ny azy koa i Fursatiya, ny “Blog 101: Ahoana no hiarovanao ny votoatinao tsy ho azon'ny mpangalatra”!! 😉 Nandeha ny fotoana ary dia tonga ny Fankalazàna ny Faha-58 taonan'ny Repoblikan'i India ka tamin'io andro io i Jitu no nisaina ny amin'ny hoe Inona no zava-bitantsika tamin'ity Firenena ity. Nanoratra koa izy fa tsy fotoana isainana momba ny Zava-bitan'ny Firenena tamintsika izao fa famehezana ny soa vitantsika ho an'ny Firenena satria ny Firenena tsirairay dia voafaritry ny mponina ao aminy, ny fisainan'izy ireo, ny asany ary ny fahavononan'ny tsirairay hanao zavatra. Amin'izao fankalazàna ny Andron'ny Repoblika izao, Sunil dia nanoratra momba ny Fahalalahana hiteny sy haneho hevitra ary koa ny amin'ireo mpitondra fanjakana eny amin'ny firenena sasantsasany izay miezaka mamehy izany fahalalahana izany amin'ny fandraisan'izy ireo fanapahankevira hentitra hanoherana ireo izay manao izany. Tsy mbola tapitra hatreo akory ny amin'ny fahalalahana hiteny. I Sanjay dia nanoratra momba io, tamin'ny fanazavàna ny andraikitra sosialin'ireo izay maniry ny hampiasa ny zony hanana Fahalalahana hiteny sy haneho hevitra. Kanefa raha iny nisaina sy nanoratra lohahevitra mafana mikasika ny Fankalazàna ny andron'ny Repoblika iny ny sasany, misy koa ireo izay toa ahy sy ireo namako nakanaka aina kely tao an-tanànan'i Ajmerer, toerana iray manan-tantara efa hatrany amin'ny 1000 taona lasa tany. 🙂
Fa moa va ny fahalalahana hiteny sy haneho hevitra mitondra any amin'ny fahalalahana hihetsika? Raha mba izany tokoa moa. Toy ny hoe vanim-potoanan'ny halatra izany izao andro izao, satria misy lehilahy hafa iray izay izao vao nanokatra tranonkala izay tsy misy afa-tsy fakàna votoatinà blaogin'olona no ao anatin'ny blaoginy. Marina aloha fa notononiny tao ny anaran'ny maro tamin'ireo mpanoratra tsirairay tompon'ny lahatsoratra, fa tsy nahazoana alalàna avy amin'ny tompony akory ny fandikàna ny ankamaroany, izay fantatra koa fa mbola lainga satria na ireo blaogera tompona lahatsoratra, izay nangalarina aza, tsy manana dika mitovy- intsony ao amin'ny blaoginy, izany no midika fa tsy tokony atao mihitsy ny mijerijery ka mandika amin'ny ampahany rehetra ny lahatsoratra nozarain'ny olona tany amin'ny blaoginy ka zarainao any amin'ny tranonkalanao avy eo. Ho fanamarinan-tena amin'ny halatra nataony, nilaza ilay voakasika fa tsy ny hahazo tombontsoa manokana akory no tanjony fa natao io blaogy io mba hahafahan'ny Hindi hahazo vaovao malalaka ety anaty Aterneto! Nangataka alalàna taminà blaogera maro izy, tao ireo nanome alalàna azy hizara ny lahatsorany maimaimpoana, tao kosa no narahana fepetra maro, na izany na tsy izany, tsy ara-drariny ny namoahany ireo lahatsoratra tsy nahazoana alalàna avy amin'ny mpanoratra ireo, ary ilain'ny olona ny mahafantatra ny antony, fa tsy azonao atao kosa aloha ny maka ny asan'olon-kafa araka izay itiavanao azy!!
Taorian'ny herintaona niandrasàna dia tonga ny lohateny lehibe vaovao avy amin'ny kitendrin'i Jitu rehefa iny izy nizara ny zavatra niainany tamin'izy avy ao India nifindra tao Koweit iny, nanohy nitantara ny olana natrehiny momba ny fakàna fahazoandàlana.
Teo amin'ny lafiny teknika, i Jagdish, tetsy ankilany, nampiseho fahazavàna ihany mikasika ny Windows Vista teo amin'ny fitaratrany.Tsy tara mihitsy i Debashish amin'ny fampahafantarana antsika ny olana eo amin'ny tsy fitoviana misy amin'ilay WordPress 2.1 vaovao sy ilay “plugin” malaza “Ultimate Tag Warrior”.
Ho famaranana izao fampahafantaràna izao, ‘ndao hijery ny fitantaràna ny Mahabharat nataon'i GK Awadhiya fony izy nandray anjara tamin'ny fifanakalozan-kevitra Kunti-Karna , fotoana izay nampahafantaran'i Kunti tamin'ny zanany lahimatoa nialoha ilay fifanandrinana lehibe tamin'izany andro izany, raha iny hifanandrina tamin'ireo zandriny 5 lahy iny i Karna, satria izy mila mandoa trosa amin'i Duryodhana, izay rahalahy sady fahavalon'i Pandavas.
Rohy natolotra am-pitiavana: Narad